ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းရဲ့ လက်ထက်မှာ နယ်သာလန် ရလဒ်ကောင်းတွေရယူနေတယ်
ဘောလုံးလောကကောင်းကင်ယံမှာ လိမ္မော်ရောင်တွေ ပြန်လည်ထွန်းလင်းလာပြီလား
20 Nov 2018 . 3:20 PM
တစ်ချိန်တုန်းက နယ်သာလန်အသင်းဆိုတာက လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေသာ မဟုတ်ဘဲ ဘောလုံးလောကကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့ အဆင့်ထိ ရောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ရေးနပ်စ်မီချယ်လ် Rinus Michel ရဲ့ Total Football ကစားဟန်၊ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff ရဲ့ မှော်ဆန်တဲ့ခြေစွမ်း၊ ဗန်ဘက်စတန် Van Basten ၊ ရီကတ် Frank Rijkaard ၊ ဂူလစ် Ruud Gullit စတဲ့ ရဲသုံးဖော်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ရော်နယ်လ်ကိုးမန်း Ronald Koeman၊ ဒီဘိုးဝါးညီနောင် ၊ ကလွိုက်ဗတ် Patrick Kluivert ၊ ဆီးဒေ့ါဖ် Clarence Seedorf ၊ ဗန်ဒါဆား Edwin van der Sar ၊ အဂ္ဂါဒါးဗစ် Edgar Davids ၊ ဘားကမ့် Dennis Bergkamp ၊ နစ္စတယ်ရွိုင်း Ruud van Nistelrooy ၊ ဗန်ပါစီ Robin van Persie ၊ ဆနိုက်ဒါ Wesley Sneijder ၊ ရော်ဘင် Arjen Robben တို့အထိ နယ်သာလန်အသင်းမှာ ကစားသမားကောင်းတွေ အများကြီး ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ဘောလုံးမျိုးဆက် ပြတ်သွားတာနဲ့အတူ နယ်သာလန်တို့ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကျဆင်းလာပေမယ့် ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလ်လုပွဲ၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ တတိယ ရခဲ့တော့ ဘောလုံးလောကမှာ လိမ္မော်ရောင်တွေ ပြန်လည်ကြီးစိုးတော့မှာလားဆိုပြီး အားလုံးက စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ နယ်သာလန်အသင်းရဲ့ ရိုလာကိုစတာခရီးစဉ်က ဆိုးရွားလာခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲတောင် မအောင်ခဲ့ဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်း ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ နယ်သာလန်တို့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီလို့ ပြောရမယ်။ UEFA Nations League ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ ပြင်သစ်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ဂျာမနီကိုနိုင်၊ ၊ ပြင်သစ်ကို အိမ်ကွင်းရှုံးကြွေးဆပ်ခဲ့တဲ့အပြင် အခုနောက်ဆုံး ဂျာမနီကို အဝေးကွင်းသရေကျခဲ့လို့ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းလက်ထက်မှာ နယ်သာလန်အသင်း ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
နယ်သာလန်အသင်းရဲ့ ဂိုးပေါက်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနေတာက ဘာစီလိုနာရဲ့ အပယ်ခံ ဆီလက်ဆန် Jasper Cillessen ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ လျင်မြန်ဖျတ်လတ်မှု၊ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေက နယ်သာလန်အသင်းအတွက် အကျိုးအများကြီးရှိစေခဲ့တယ်။
အသက်(၂၂)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ဒမ်ဖရိုင်းစ် Denzel Dumfries ၊ (၁၉)နှစ်အရွယ် ဒီလိဂ် Matthijs de Ligt တို့ကို လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့်နေရာပေးခဲ့တာက ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ ပြောရမယ်။
သူတို့နဲ့အတူ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက် Virgil van Dijk လည်းရှိနေလို့ နယ်သာလန် ခံစစ်က အားရစရာကောင်းနေတယ်။ ဒီကစားသမားတွေအပြင် နာသန်အကီ Nathan Aké (၂၃နှစ်)၊ ဘလင်း Daley Blind (၂၈နှစ်)၊ ဒီဗာ့ခ်ျ Stefan de Vrij (၂၆နှစ်) တို့လို ကစားသမားကောင်းတွေကလည်း အဆင်သင့်ရှိနေသေးတယ်။
အသက်(၂၁)နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် အေဂျက်စ်ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီဒီယွန်း Frenkie de Jong ဟာ နယ်သာလန် ကွင်းလယ်တစ်နေရာကို အပိုင်စားယူထားတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိသလို၊ Creativity ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒီလိုကစားသမားမျိုးကို ဘာစီလိုနာအသင်းက ချိတ်ဆက်နေတာ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။
တစ်ကျော့ပြန် လင်းလက်လာတဲ့ ကြယ်ပွင့်
နယ်သာလန်အသင်း ရလဒ်ကောင်းတွေထဲမှာ ခြေစွမ်းပြန်ပြနေတဲ့ ဒီပိုင်း Memphis Depay ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း မေ့ထားလို့မရဘူး။ မန်ယူအသင်းမှာ ငရဲခန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီပိုင်းအတွက် လိုင်ယွန်အသင်းဟာ နားခိုရာအစစ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး တစ်ကျော့ပြန်ခြေစွမ်းနဲ့ ကလပ်အသင်းမှာရော၊ နိုင်ငံအသင်းမှာပါ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပြနေတယ်။
နယ်သာလန်အသင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းဟာ (၁၀)ပွဲအပြီးမှာ (၄)ပွဲနိုင်၊ (၄)ပွဲသရေ၊ (၂)ပွဲရှုံးရလဒ်ထွက်အောင် စွမ်းဆောင်ထားတယ်။ (၄-၂-၃-၁) ကစားကွက်ကို အခြေခံထားပေမယ့် ပွဲအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ကစားကွက်အပြောင်းအလဲ လုပ်လေ့ရှိသူပါ။ ဂျာမနီနဲ့ (၂)ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ချေပဂိုးပြန်ရဖို့အတွက် ဒုတိယပိုင်း လက်ကျန်မိနစ်မှာ ဗန်ဒိုက်ကို အထောင်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် ကစားစေခဲ့ပြီး အလှည့်အပြောင်းလုပ်ခဲ့တာက ချီးကျူးစရာပါပဲ။
ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းရဲ့အသင်းဟာ လူငယ်၊ လူကြီးကို အချိုးညီညီပေါင်းစပ်ထားပြီး ဟန်ချက်မျှတတဲ့အသင်းဖြစ်လာတယ်။ ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းဟာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ကစားသမားဆိုရင် ပြန်ရွေးချယ်ဖို့ လက်မတွံ့ဘဲ အခုအသင်းမှာ အသက်(၃၁)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘာဘဲလ် Ryan Babel လို ကစားသမားမျိုးကို ပြန်ရွေးထားတယ်။ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်ရောက်လာတဲ့ လိမ္မော်ရောင်တပ်သားတွေ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . . .
Photo:Finger Lakes Times,Washington Post,EIF Soccer,BBC,NU.nl,Sportnieuws,Le10sport,FOX Sports Asia
ဘောလုံးလောကကောငျးကငျယံမှာ လိမ်မျောရောငျတှေ ပွနျလညျထှနျးလငျးလာပွီလား
တဈခြိနျတုနျးက နယျသာလနျအသငျးဆိုတာက လူရိုသေ၊ ရှငျရိုသသော မဟုတျဘဲ ဘောလုံးလောကကို လှမျးမိုးထားနိုငျတဲ့ အဆငျ့ထိ ရောကျရှိခဲ့ဖူးတယျ။ ရေးနပျဈမီခယျြလျ Rinus Michel ရဲ့ Total Football ကစားဟနျ၊ ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff ရဲ့ မှျောဆနျတဲ့ခွစှေမျး၊ ဗနျဘကျစတနျ Van Basten ၊ ရီကတျ Frank Rijkaard ၊ ဂူလဈ Ruud Gullit စတဲ့ ရဲသုံးဖျော။ အဲဒီနောကျပိုငျး ရျောနယျလျကိုးမနျး Ronald Koeman၊ ဒီဘိုးဝါးညီနောငျ ၊ ကလှိုကျဗတျ Patrick Kluivert ၊ ဆီးဒေ့ါဖျ Clarence Seedorf ၊ ဗနျဒါဆား Edwin van der Sar ၊ အဂ်ဂါဒါးဗဈ Edgar Davids ၊ ဘားကမျ့ Dennis Bergkamp ၊ နစ်စတယျရှိုငျး Ruud van Nistelrooy ၊ ဗနျပါစီ Robin van Persie ၊ ဆနိုကျဒါ Wesley Sneijder ၊ ရျောဘငျ Arjen Robben တို့အထိ နယျသာလနျအသငျးမှာ ကစားသမားကောငျးတှေ အမြားကွီး ထှကျပျေါခဲ့ဖူးတယျ။
အဲဒီနောကျပိုငျး ဘောလုံးမြိုးဆကျ ပွတျသှားတာနဲ့အတူ နယျသာလနျတို့ရဲ့ အရှိနျအဝါကဆြငျးလာပမေယျ့ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလျလုပှဲ၊ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ တတိယ ရခဲ့တော့ ဘောလုံးလောကမှာ လိမ်မျောရောငျတှေ ပွနျလညျကွီးစိုးတော့မှာလားဆိုပွီး အားလုံးက စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွတယျ။
ဒါပမေဲ့ နယျသာလနျအသငျးရဲ့ ရိုလာကိုစတာခရီးစဉျက ဆိုးရှားလာခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲတောငျ မအောငျခဲ့ဘူး။ အခုအခြိနျမှာတော့ နာမညျကြျောကစားသမားဟောငျး ရျောနယျလျကိုးမနျးရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ နယျသာလနျတို့ လမျးကွောငျးမှနျပျေါပွနျရောကျလာပွီလို့ ပွောရမယျ။ UEFA Nations League ပွိုငျပှဲ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမှာ ပွငျသဈအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ ဂြာမနီကိုနိုငျ၊ ၊ ပွငျသဈကို အိမျကှငျးရှုံးကွှေးဆပျခဲ့တဲ့အပွငျ အခုနောကျဆုံး ဂြာမနီကို အဝေးကှငျးသရကေခြဲ့လို့ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တကျရောကျခဲ့ပါပွီ။ ရျောနယျလျကိုးမနျးလကျထကျမှာ နယျသာလနျအသငျး ဘာတှပွေောငျးလဲသှားလညျးဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
နယျသာလနျအသငျးရဲ့ ဂိုးပေါကျကို အကောငျးဆုံး ကာကှယျပေးနတောက ဘာစီလိုနာရဲ့ အပယျခံ ဆီလကျဆနျ Jasper Cillessen ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ လငျြမွနျဖတျြလတျမှု၊ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှကေ နယျသာလနျအသငျးအတှကျ အကြိုးအမြားကွီးရှိစခေဲ့တယျ။
အသကျ(၂၂)နှဈသာရှိသေးတဲ့ ဒမျဖရိုငျးဈ Denzel Dumfries ၊ (၁၉)နှဈအရှယျ ဒီလိဂျ Matthijs de Ligt တို့ကို လကျရှေးစငျအသငျးမှာ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့နရောပေးခဲ့တာက ရျောနယျလျကိုးမနျးရဲ့ မှနျကနျတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြလို့ ပွောရမယျ။
သူတို့နဲ့အတူ လီဗာပူးလျအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ နောကျခံလူ ဗနျဒိုကျ Virgil van Dijk လညျးရှိနလေို့ နယျသာလနျ ခံစဈက အားရစရာကောငျးနတေယျ။ ဒီကစားသမားတှအေပွငျ နာသနျအကီ Nathan Aké (၂၃နှဈ)၊ ဘလငျး Daley Blind (၂၈နှဈ)၊ ဒီဗာ့ချြ Stefan de Vrij (၂၆နှဈ) တို့လို ကစားသမားကောငျးတှကေလညျး အဆငျသငျ့ရှိနသေေးတယျ။
အသကျ(၂၁)နှဈသာ ရှိသေးပမေယျ့ အဂေကျြဈကှငျးလယျလူ ဖရနျကီဒီယှနျး Frenkie de Jong ဟာ နယျသာလနျ ကှငျးလယျတဈနရောကို အပိုငျစားယူထားတယျ။ ကိုယျတိုငျ ဂိုးသှငျးနိုငျစှမျးရှိသလို၊ Creativity ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး ဒီလိုကစားသမားမြိုးကို ဘာစီလိုနာအသငျးက ခြိတျဆကျနတော သိပျတော့မထူးဆနျးပါဘူး။
တဈကြော့ပွနျ လငျးလကျလာတဲ့ ကွယျပှငျ့
နယျသာလနျအသငျး ရလဒျကောငျးတှထေဲမှာ ခွစှေမျးပွနျပွနတေဲ့ ဒီပိုငျး Memphis Depay ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍကိုလညျး မထေ့ားလို့မရဘူး။ မနျယူအသငျးမှာ ငရဲခနျးဖွဈခဲ့တဲ့ ဒီပိုငျးအတှကျ လိုငျယှနျအသငျးဟာ နားခိုရာအစဈအမှနျဖွဈခဲ့ပွီး တဈကြော့ပွနျခွစှေမျးနဲ့ ကလပျအသငျးမှာရော၊ နိုငျငံအသငျးမှာပါ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျပွနတေယျ။
နယျသာလနျအသငျးကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလတုနျးက စတငျကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ရျောနယျလျကိုးမနျးဟာ (၁၀)ပှဲအပွီးမှာ (၄)ပှဲနိုငျ၊ (၄)ပှဲသရေ၊ (၂)ပှဲရှုံးရလဒျထှကျအောငျ စှမျးဆောငျထားတယျ။ (၄-၂-၃-၁) ကစားကှကျကို အခွခေံထားပမေယျ့ ပှဲအခွအေနပေျေါ မူတညျပွီး ကစားကှကျအပွောငျးအလဲ လုပျလရှေိ့သူပါ။ ဂြာမနီနဲ့ (၂)ဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့ပှဲမှာ ခပြေဂိုးပွနျရဖို့အတှကျ ဒုတိယပိုငျး လကျကနျြမိနဈမှာ ဗနျဒိုကျကို အထောငျတိုကျစဈမှူးအဖွဈ ကစားစခေဲ့ပွီး အလှညျ့အပွောငျးလုပျခဲ့တာက ခြီးကြူးစရာပါပဲ။
ရျောနယျလျကိုးမနျးရဲ့အသငျးဟာ လူငယျ၊ လူကွီးကို အခြိုးညီညီပေါငျးစပျထားပွီး ဟနျခကျြမြှတတဲ့အသငျးဖွဈလာတယျ။ ရျောနယျလျကိုးမနျးဟာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ကစားသမားဆိုရငျ ပွနျရှေးခယျြဖို့ လကျမတှံ့ဘဲ အခုအသငျးမှာ အသကျ(၃၁)နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ဘာဘဲလျ Ryan Babel လို ကစားသမားမြိုးကို ပွနျရှေးထားတယျ။ လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ပွနျရောကျလာတဲ့ လိမ်မျောရောငျတပျသားတှေ အောငျမွငျမှု ပနျးတိုငျကို ဆကျလကျခြီတကျနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . . .